Yuusuf Garaad “Yaan la wiiqin Warbaahinta Qaranka oo Shacab iyo Dowladba muhiim ah” – Kalfadhi
Yuusuf Garaad “Yaan la wiiqin Warbaahinta Qaranka oo Shacab iyo Dowladba muhiim ah”
Waxaan xusuustaa Allah ha u naxariistee Madaxweyne Siyaad oo shil galay in loo qaaday Isbitaal Sucuudiga ah.
Warbaahinta Qaranka oo ka dhigtay in xaalkiisu uu caadi yahay ayaa maalintii dambe BBC ay wareysatay Wasiir la socday Madaxweynaha.
Markii la weydiiyay in uu wax cuni karo wuxuu ku jawaabay “Maanta ayuu caano cabbay”.
Waa markii Radiyo Muqdisho lagu xaman jiray in warka keliya ee sax ah ee ka baxaa uu yahay “Halkani waa Radiyo Muqdisho”.
Dacaayad aan run ahayn ayay ahayd, laakiin waxay tusaale u ahayd in aanay xaaladda dalka ka wada run sheegin.
Madax, maamul iyo suxufi kasta oo ku lug leh waa in uu fahmaa in teknooljiyadu ay maanta saamaxeyso in hal qof uu keligii Live u sii daayo warka uu doono oo waliba muuqaal wata.
Warbaahinta Qaranka oo Shacab iyo Dowladba muhiim u ah yaan la wiiqin oo aan laga reebin tartanka xawaaraha badan ee warbaahinta caalamka ee uu hagayo horumarka teknoolajiyada qiimaha jaban ee digitaalku.
Golaha Shacabka oo maanta Aqrinta 2aad marinaya Sharciga Patrol-ka
Xildhibaan C/qaadir Carabow oo Mashaariic ka fuliyay degmada Balcad